Cilmi-Baaris: Caano-cabista badan oo la sheegay in ay keento cimri gaabad + video – fogaanarag
Caano-cabista badan oo la sheegay inay leedahay cimri-gaabad Natiijada darasaad cusub oo laga soo saaray dalka Sweden, ayaa sheegaysa in dadka aadka u caba caanaha ay la kulmaan khatar xoogan oo ah inuu cimrigooda uu degdego, gaar ahaan dumarka.
Daraasadan oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan jaamacada Uppsala iyo machadka Karolinska eek u yaala magaalada Stockholm, ayaa waxay tiir ka dhiganaysaa xog ay bixiyeen ilaa 106,000 oo isugu jira rag iyo dumar guud ahaan dalka.
Waxay xogtaasi muujinaysaa in dadka caanaha badsada ay halis ugu jiraan geeri soo deg degta marka loo eego kuwa aan caanahaba cabin. Waxaa arrintan ugu wacan baa la leeyahay hoos u dhac oo ku yimaada heerka maadada gubta xayrta ku jirta jirka, iyadoo daraasadan cusubi ay tilmaamaysa farqiga dhinaca jinsiga sida ay halista u kala badsadaan.
“ Daraasad hore ayaanu ku ogaanay in heerka isticmaalka caanaha lagu xiriirin karo in dhimasho soo hormarta ay timaado. Sidaasi darteed baaristan cusub waxay sheegaysaa inuu jiro kala duwanaansho xaga jinsiga oo aan horey loo ogaan.” Ayuu Karl Michaëlsson oo ka tirsan jaamacada Uppsala.
Cilmi-baaristan waxaa lagu soo daabacay wargeyka American Journal of Epidemiology, kaasoo dhaba-gal ku sameeyey tilaamaha sheegaya in caano cabayaasha aysanba ka badbaadi karin lafo-jajab ku yimaad. Daraasadan weli lama xaqiijin in si rasmiya loogu adeegsado talo ah in dadku ay yareeyaan caano-cabista.